အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ သီချင်း album ကိုအားပေးတဲ့သူများနေလို့ လက်မှတ်တွေထိုင်ထိုးနေရတဲ့ အဆိုတော် လင်းလင်း – Cele Oscar
အမိုက်စား Rocker ကြီးတစ်ယောက် အဖြစ် ပရိသတ်တွေ အားပေးကြတဲ့ လင်းလင်း ကတော့ အခုဆိုရင် သီချင်းခွေ အသစ်ထွက် ရှိလာတော့မှာပါ။ မသေဆေး လို့ နာမည် ပေးထားတဲ့ လင်းလင်း ရဲ့ သီချင်းအယ်လ်ဘမ်ကတော့ (၅) နှစ်ကြာပြီးနောက်မှ ထွက်ရှိ လာတဲ့ အယ်လ်မ်တစ်ချပ်ပါ။
လင်းလင်း ရဲ့ ဂီတ ဖန်တီးမှုတွေကို စောင့်မျှော် နေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ Pre order တင်ချိန် မှာတင် အားပေး ကြမ်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီ အကြောင်းကို “ပရီအော်ဒါ ၂၀၀ ဟာ ဆယ့် ငါးမိနစ် နဲ့ ကုန်လို့ ၅၀၀ ထပ်တိုးတာလဲ ကုန်သွားပြီးထောင်ဂဏန်းရောက်သွားတယ်။ အခုထိလဲ တောက်လျှောက် တက်နေလို့ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒီတော့ ,,,,, ၂၈ ရက်နေ့ထိ မှာ သမျှ အော်ဒါတွေကို ရသလောက် လက်မှတ် ထိုးပေးပါမယ်။ ကိုယ့်လူတွေဘဲ မှာနိုင်မလား ? ကျနော်ဘဲ နေ့,ည မနားတမ်း လက်မှတ် ထိုးနိုင်မလား ! တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဗျ”ာ ဆိုပြီးတော့ လင်းလင်း က သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာရေးသားထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မှာထားတဲ့ အခွေတွေ မှာကြိုးစား ပမ်းစားလက်မှတ်ထိုးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်း”ဆရာမထံ အိမ် အလုပ်တွေကနေ ၃ ရက်ခွင့်ယူထားတယ် ။ ဟို အချစ်ကလေး နှစ်ယောက်ကိုလဲ အဘိုး အဘွားဆီ အိမ်နှင်ဒဏ် ပို့ထားတယ်,,ကဲ,,,, လာစမ်း ဒီလို အပုံ ၃ ပုံရှိတယ် လက်မှတ်စ,ထိုးပြီ ” ဆိုပြီးတော့ ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာရေးသားထားပြန်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ လင်းလင်း ရဲ့ သီချင်းအသစ်တွေကို နားထောင်ဖို့ အတွက် ရင်ခုန်နေကြပြီထင်ပါရဲ့နော်…
အမိုကျစား Rocker ကွီးတဈယောကျ အဖွဈ ပရိသတျတှေ အားပေးကွတဲ့ လငျးလငျး ကတော့ အခုဆိုရငျ သီခငျြးခှေ အသဈထှကျ ရှိလာတော့မှာပါ။ မသဆေေး လို့ နာမညျ ပေးထားတဲ့ လငျးလငျး ရဲ့ သီခငျြးအယျလျဘမျကတော့ (၅) နှဈကွာပွီးနောကျမှ ထှကျရှိ လာတဲ့ အယျလျမျတဈခပျြပါ။
လငျးလငျး ရဲ့ ဂီတ ဖနျတီးမှုတှကေို စောငျ့မြှျော နကွေတဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ Pre order တငျခြိနျ မှာတငျ အားပေး ကွမျးခဲ့ကွပါတယျ။အဲ့ဒီ အကွောငျးကို “ပရီအျောဒါ ၂၀၀ ဟာ ဆယျ့ ငါးမိနဈ နဲ့ ကုနျလို့ ၅၀၀ ထပျတိုးတာလဲ ကုနျသှားပွီးထောငျဂဏနျးရောကျသှားတယျ။ အခုထိလဲ တောကျလြှောကျ တကျနလေို့ ဝမျးသာဂုဏျယူပါတယျ။ ဒီတော့ ,,,,, ၂၈ ရကျနထေိ့ မှာ သမြှ အျောဒါတှကေို ရသလောကျ လကျမှတျ ထိုးပေးပါမယျ။ ကိုယျ့လူတှဘေဲ မှာနိုငျမလား ? ကနြျောဘဲ နေ့,ည မနားတမျး လကျမှတျ ထိုးနိုငျမလား ! တှကွေ့သေးတာပေါ့ဗြ”ာ ဆိုပွီးတော့ လငျးလငျး က သူ့ရဲ့ဖဘှေ့တျချမှာရေးသားထားပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ မှာထားတဲ့ အခှတှေေ မှာကွိုးစား ပမျးစားလကျမှတျထိုးနတေဲ့အကွောငျးကိုလညျး”ဆရာမထံ အိမျ အလုပျတှကေနေ ၃ ရကျခှငျ့ယူထားတယျ ။ ဟို အခဈြကလေး နှဈယောကျကိုလဲ အဘိုး အဘှားဆီ အိမျနှငျဒဏျ ပို့ထားတယျ,,ကဲ,,,, လာစမျး ဒီလို အပုံ ၃ ပုံရှိတယျ လကျမှတျစ,ထိုးပွီ ” ဆိုပွီးတော့ ဖဘှေ့တျချမှာရေးသားထားပွနျပါတယျ။ ပရိသတျတှကေတော့ လငျးလငျး ရဲ့ သီခငျြးအသဈတှကေို နားထောငျဖို့ အတှကျ ရငျခုနျနကွေပွီထငျပါရဲ့နျော…